ihe anyị na - eme - Chengdu Dien Photoelectric Technology Co., Ltd.
Anyị etinyela onwe anyị n'ọrụ maka ịmepụta ihe nyocha nke ihe eji emepụta kristal maka ihe karịrị afọ 12, ọkachasị na ntinye akwụkwọ nke akwụkwọ nyocha.
Ngwa anya nhazi
Anyị nwere nnukwu ndị injinia maka nhazi ngwa anya, ndị nwere ahụmịhe bara ụba na ịcha na polishing.
Iji mezuo ihe mkpuchi nke onye ọ bụla chọrọ maka ngwa dịgasị iche maka ndị ahịa ọ bụla, anyị anaghị akwụsị nzọụkwụ anyị maka mmelite nke mma mkpuchi.
A na-elekọta nke ọ bụla nke ọma tupu ibuga ndị ahịa. Maka ebumnuche a, anyị na-enyochakarị ihu elu n'okpuru ogo 100 ugboro na nyocha nke onye ọ bụla dịka beam beam na WFD na-anabatakwa dịka iwu.
Iji kwekọọ na ngwa ndị pụrụ iche, dị ka ike dị elu, kristal nwere ike mebie n'oge usoro a, anyị na-enyekwa ndị ọrụ ọrụ ịzigharị ọrụ maka ndị ahịa.
Nka na ụzụ na-agba izu
Ọ bụrụ na ị maghị etu esi hazie sistemụ gị ma ọ bụ ihe enwere ike iji ya na ngwa a, echegbula onwe anyị, anyị nwere ndị injinia nwere ike ịnye ndụmọdụ ọkachamara ọkachamara n'efu. Naanị nweere onwe gị ịjụ.
DIEN TECH na-enye kristal laser 1-2um, dị ka, Nd ： YAG 、 Nd ， Ce ： YAG 、 Yb ： YAG 、 Nd ： YAP 、 Nd ： YVO4. 2 ~ 3um kristal laser ， dị ka ： Ho ： YAG 、 Ho ： YAP 、 CTH ： YAG 、 Er: YAG 、 Er ： YSGG 、 Cr ， Er ： YSGG 、 Fe ： ZnSe 、 Cr ： ZnSe. Nkume mkpuchi ogologo NLO dị ka ： ZGP 、 AGS 、 AGSE 、 AGISE 、 CdSe. Ọzọkwa ndị ọzọ kristal dabeere ngwa anya mmiri na ngwaọrụ.
Anyị ike gụnyere ngwa anya ọcha 'rụpụta, usoro, mkpuchi, mmezi na anyị na-enwe ike inyere ndị ahịa na a dum set nke ihe ngwọta nke laser usoro na oru ize. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ị chọrọ, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka.